ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းအား ပြည်ပမှ ဧည့်အဖွဲ့တွေ့ဆုံ နားလည်မှု စာချွန်လွှာ ရေးထိုးပွဲကျင်းပ | Moep1's Blog
၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းအား ပြည်ပမှ ဧည့်အဖွဲ့တွေ့ဆုံ နားလည်မှု စာချွန်လွှာ ရေးထိုးပွဲကျင်းပ
(နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၀၈)
အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းအား ထိုင်းနိုင်ငံ Italian-Thai Development Public Co., Ltd., မှ President, Mr.Premchai Karnasuta နှင့် စင်ကာပူ British Virgin Island မှ Wind Fall Energy Services Limited Director, Mr.Chua Chay Jin နှင့် အဖွဲ့ဝင် များသည် အောက်တိုဘာ ၉ ရက် ညနေပိုင်းက နေပြည်တော်ရှိ အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ဧည့်ခန်းမသို့ လာရောက်တွေ့ဆုံကြသည်။
ထို့နောက် အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဦးစီးဌာနနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ Italian-Thai Development Public Co., Ltd., ၊ စင်ကာပူ British Virgin Island မှ Wind Fall Energy Services Limited Director, Mr.Chua Chay Jin တို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြမည့် တနင်္သာရီ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း အတွက် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ် ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားကို အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ဆက်လက် ကျင်းပသည်။
အစီအစဉ်အရ အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းက နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားသည်။ ဆက်လက်၍ ထိုင်းနိုင်ငံ Italian-Thai Development Public Co., Ltd., မှ President, Mr.Premchai Karnasuta က ဆောင်ရွက်မည့် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
ယင်းနောက် အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည် ဖော်ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ Italian-Thai Development Public Co., Ltd., မှ President, Mr.Premchai Karnasuta က နားလည်မှု စာချွန်လွှာများကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။
This entry was posted on Sunday, October 12th, 2008 at 5:42 am and is filed under တနင်္သာရီ (Thanintharye).	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.